Fetison : « aleo hirotsaka ho fidiana ny Prezidà Ravalomanana » – MyDago.com aime Madagascar
Fetison : « aleo hirotsaka ho fidiana ny Prezidà Ravalomanana »
Isan’ireo mpanao politika tanora, nanana ny toerany teo amin’ny ankolafy Ravalomanana, nisitaka tsy ho lehiben’ny ankolafy intsony kanefa mbola mitana ny foto-keviny i Fetison Rakoto Andrianirina.Nifampiresaka taminay izy momba ny toe-draharaha-politika amin’izao fotoana izao, indro entinay aminao izany :
Solo Razafy : Anisan’ireo nandray anjara feno tamin’ny famahana an’ity krizy politika ity ianao hatramin’ny taona 2009. Afa-po amin’ny fizotran’ny toe-draharaha ve ianao tompoko ?
Fetison Rakoto Andrianirina : Efa hatramin’ny taona 2008 no nandray andraikitra ny tenako tamin’izao famahana ny olana izao. Taorian’ny nahavoatery ny Filoha Ravalomanana handeha any ivelany dia nandray ny fanapahan-kevitra aho ny hanoratra tany anivon’ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Afrikana ny amin’ny tokony hisian’ny fifampidinihina eo amin’ireo mpifandrina politika. Tadidinareo tsara ny fisian’ireny fivoriana tsy nanam-pahataperany ireny, izay niteraka ny fifanarahana farany teo tamin’ny fanaovana ny sonia ny tondro zotra. Ny afa-po tanteraka tsy misy fa ny azo ifaliana dia efa miha-mandroso ny fametrahana ny rafitra rehetra manaraka ny fifanarahana, na dia tsy mbola tonga lafatra aza. Ho feno kokoa ny fifaliako raha toa ka tafavoaka avokoa ny gadra politika, tafaverina eto an-tanindrazana ireo nitsoa-ponenana, misy ny fahalalahana ara-demokratika sy ny fiaraha-mitantana tena marina hanomana ny fiverenanantsika haingana amin’ny fitondrana voafidim-bahoaka.
Solo Razafy :Tsy mahatsiaro ho voahilika ve ianao amin’ny tsy nahazoana toerana teo amin’ny rafitra Tetezamita kanefa ianao dia anisan’ny tena nahita faisana noho izao fitadiavam-bahaolana izao ?
F.R.A. : Inoako fa tsapan’ny Malagasy ny finiavana tao anatiko hamaha sy hamarana an’izao olana ara-politika mampikatso ny firenena izao. Rehefa hitako fa nifampiziriziry ny Ankolafy telo andaniny sy ny HAT ankilany, dia nanapa-kevitra ny nisintaka ny Ankolafy Ravalomanana aho, nahafahako nampifandray ny roa tonta tamin’ny alalan’ilay Antso Paix des Braves. Na dia tsy hita nivantana ny asa natao tamin’izany, ny vokatra kosa dia azo tsapahin-tanana satria nanamora ny fifanatonan’ireo tsy mitovy hevitra izy iny. Noho io finiavana hampifanatona io dia nanamora ny asako ny fanambarana ampahabehimaso nataoko fa tsy handray anjara andraikitra na amin’ny Governemanta na ny Rafitra Mpanao lalàna aho mandritra izao Tetezamita izao. Nanaja izany aho !
Solo Razafy : Vita anefa iny ny fivorianan’ny CST sy ny CT. Toa tsy hita mangirana ny famoahana ny gadra politika sy fampodiana ny Prezidà Ravalomanana ary ny fametrahana tontolo politika milamina ? Toa tsy tanteraka akory ny fampiharana ny tondro zotra. Ny hevitrao ?
F.R.A. : Famitahana tsotra izao ny ambaran’ny Filohan’ny Tetezamita sy ny Ministry ny Fitsarana ny amin’ny filazana fa tsy misy gadra politika eto Madagasikara kanefa ny famoahana an’ireo voagadra nandritra ny taona 2009-2010-2011 noho ny resaka politika dia voalazan’ny tondro zotra. Raha tena mampihatra ny lalàna ny Fitsarana dia azo atao tsara ny mihevitra ho fihetsika politika ny raharaha Fort-Duschène, Bani sy ny fisamborana hafa mikasika ny fanohitohinana ny HAT, izay azo ambara tsy misy fisalasalana fa fitondrana tsy ara-dalàna sy nankatoavina tamin’ny vanim-potoana nisehoan’ireny trangan-javatra ireny. Mitohy ny tolona noho izany ho fitakiana ny fampiharana tsy misy fepetra ny tondro zotra sy ny ara-dalàna
Solo Razafy :. Tsy nisy nilàna ny fidiran’ny Ankolafy Ravalomanana sy ny ampahany amin’ny Ankolafy Zafy Albert ao amin’io rafitra io ve izany raha ny fahitanao azy ?
F.R.A. : Tsy ny fandraisan’izy ireo andraikitra ao amin’io rafitra nateraky ny tondro zotra io no ratsy fa ny tsy fisian’ny fiaraha-mitantana tena izy. Raha mba te-hampihatra ny tondro zotra ny mpanohitra ao anatin’io rafitra io dia misy ny sakana etsy sy eroa ary tsy hampilamina ny toe-draharaha izany. Hahatanty lazon’ady ve izy ireo ? Noho izany dia tsara raha atao ilay fihaonana an-tampony nangatahan’ny Ankolafy Ratsiraka mba hahamari-toerana ny rafitra tetezamita izay apetraka sy hahafahana mpihatra ny tondro zotra.
Solo Razafy :Nandeha ny resaka fony ianao mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana fa mihevitra ny tsy hampody ny Prezidà Ravalomanana ianao. Sao dia mifandray tendro amin’ireto FAT ireto ianao ?
F.R.A. : Tsy voatery ny olona mitabataba etsy sy eroa fa hamerina ny filoha Ravalomanana akory no miasa ho amin’izany. Anisan’ny vahaolana tsy hiverenan’ny olana ara-politika eto amin’ity firenena ity ny famelàna ny zanany hody sy handray anjara amin’ny fampandrosoana azy. Izay no efa nijoroako hatreny amboalohany ary tsy mbola mivaona amin’izany ny tanjoko. Fotoana hanamboarana ny fomba fanao politika sy ny fitondrana ny firenena izao Tetezamita izao ka tokony hahay hanararaotra an’izany ny rehetra. Ny mampahonena dia ny fiheverana fa izay rehetra tsy miaraka ao anatin’ny rafitra novolena dia tsy atokisana sy heverina tsy ahavita hanova zavatra.
Solo Razafy :Araky ny hevitrao, tokony mbola hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ve ny Prezidà Ravalomanana ?
F.R.A. : Tsy hitako izay tokony hanakanana azy tsy hilatsaka ho fidiana. Aleo ny Malagasy hisafidy ankalalahana izay olona hametrahany ny fitokisany ka hantenainy fa hitondra fampivoarana ho azy, na iza io na iza. Iza moa no tompon’andraikitra tamin’ny fandoroana ny Radio sy televizionim-pirenena tamin’ny 26 janoary 2009 ? Fihetsika nateraky ny antso avy aiza moa no nanimbàna sy nandorana fananan’olona maro be tamin’ireny ? Iza moa no nanentana ny olona hiakatra teny Ambohitsorohitra tamin’ny 7 febroary 2009. Samy tompon’andraikitra tamin’ny fahavoazan’ny firenena amin’ny toerana misy azy izao ny rehetra ary tsy ho diso anjara amin’izany Atoa Rajoelina ka tokony hahay hifamela ka hibanjina miaraka ny ho avin’ny Malagasy. Mila manavao ny repoblika miaraka ny rehetra raha te hampandroso an’ity Madagasikara ity.
Solo Razafy : Fanontaniana mivantana. Misy ny miahiahy fa hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena hifaninana amin’ny Prezidà Ravalomanana ianao. Marina ve izany ?
F.R.A. : (…tsiky) Aoka tsy ho adinon’ny rehetra fa mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana nandritra ny taona maro ny tenako. Dia ho azo eritreretina ve ny hoe hifaninana amin’ny filoha Ravalomanana ny tenako raha toa ka manana faniriana hanao izany ? Mangataka ny fanovana ny fanaovana politika eto amitsika aho koa ataoko angamba fa tokony izaho no hampiseho ny fomba fanao mendrika. Tsy manakana ny fandraisako anjara ho fampandrosoana ny firenena sy ny Malagasy anefa izany. Misy fotoany daholo ny zava-drehetra !
Solo Razafy : Farany, araky ny fanazavanao teo, toa efa mifarana izany ilay antso Paix des Braves nataonao, inona no antony tsy hiverenanao ao amin’ny Ankolafy Ravalomanana amin’izay sa mikasa ny hamorona antoko politika vaovao ho anao ianao ?
F.R.A. : Mifanindran-dalana amin’ny firosoan’ny fametrahana ny rafitry ny Tetezamita ny ho avin’ny Ankolafy rehetra. Mifarana amin’ny famoahana an’ireo gadro politika, fampodiana ny filoha Ravalomanana sy ireo niara-dia taminy ny asan’ny Ankolafy. Tsy maintsy hisy rafitra vaovao aterak’izany trangan-javatra izany rehefa tanteraka daholo ireo. Maro ny fomba hitondrana ny anjara biriky ho fampandrosoana ny firenena, izay mila fanohanana sy fandraisana andraikitra avy amin’ny Malagasy.
Avelao hirotsaka ho fidiana ny filoha Ravalomanana hoy ny avy any amin’ny faritra !
Pdt Ravalomanana : Tsy maintsy mody aho ary hirotsaka ho fidiana !
Mody ny Filoha Ravalomanana ary mirotsaka ho fidiana indray !
Auteur Solo Razafy*Publié le 17 décembre 2011 17 décembre 2011 Catégories Politique
13 pensées sur “Fetison : « aleo hirotsaka ho fidiana ny Prezidà Ravalomanana »”
17 décembre 2011 à 9 h 55 min
Fanontaniana tokony napetraka taminy : »Nilàza hono ihanao fa HANAO izay azonao atao rehetra, mba ahafahin’ny Prezidà Ravalomana miverina any an-tanindrazana, fa rahatoa ka tsy TANTERAK’IZANY, dia IHANAO NO HIROTSAKA HO FIDIANA » !
Olona maro tao anatin’ny antoko TIM hono no nandreha an’io fanambaràna io ! Ny tsy fantatra fotsiny tamin’izany fotoana izany dia ny hoe, amin’ny anaran’ny TIM sa tsia !
Miha mazàva izany izao ny resaka !
Il vaut mieux être seul, que mal accompagné ???????
17 décembre 2011 à 15 h 45 min
L’union fait la force l’oignon fait la soupe ,mais la politique des colons c’est pas d’union et pas de soupe pour les indigenes seulement des coups de baton !
18 décembre 2011 à 23 h 43 min
Diffuser,donner une certaine notoriété , une rmeur , des on-dit constitue un deni d’objectivité dans l’information…
Certains , sous le couvert d’un pseudo , ne parviennent pas à s’interdire d’affabuler ,de faire l’innocent en « rapportant » soit-disant les dires de certains propos tenus devant tant de personnes..
Les membres du TIM ont des noms ,ders responabilités..et pourquoi faire semblant de méconnaître cette règle élémentaire de se taire si on n’a rien à dire ou si ce quel’on veut dire n’ a aucun fond de vérité : c’est cela aussi la liberté de s’exprimer , c’est de s’nterdire d’affabuler , de participer à la propation des rumeurs !
19 décembre 2011 à 8 h 16 min
Aza dia fetsifetsison eo kosa e, ianao, teo ianao no niala koa rehefa mitady handresy ny tolona : vao hoe avelao i dada hilatsaka. ilay niala aloha dia famadihana ny tolona e, na dia tsy nakany @ foza aza.
19 décembre 2011 à 11 h 57 min
Aleo koa i coutiti, Sombila hilatsaka ho fidiana, ireny toa mba vitsivitsy ny olona novonoiny.
Afaka mamono olona sy mangalatra izany dia reefa avy eo milatsaka ho fidiana, dia blanc comme neige na lany na tsy lany.
Pays de Tsimatimanota izany ve no tian’ny Fety e.
19 décembre 2011 à 13 h 08 min
tanora a!nikimpy ianao sa nihiratra tamin’ireny 2009 ireny tsy nahita ny fandrobana sy fandorana fananan’olona?moa tsy ny tolona nataonareo no nitarika ireny???firifiry ny olona maty sy tsy hita popoka?matimaty foana zany izy ireny nosihosenareo ny fahafatesany satria tsy mba nisy na de indray mandeha aza ny fitsarana ka namotsipotsitra ireny.faharoa tsy nandre ve ny sofinao tamin’ireny fa demokrasia no hatsangana eto ary mba ho firenena lohalaharana amin’izany isika?aiza zao zany,de milaza ianao fa tsy mba namono olona??tao anatin’ny fitondranareo:firy sahady zay no matimaty foana sy tsy manan-kohanina ary matin’ny dahalo sy mpandroba,de mbola hilaza ianao fa madio tanana????tsy misy tsy diso ry tanora a!fa ny milaza azy ho marina miohatra amin’ny hafa de famitahan-tena sy fizahozahoana fotsiny ihany.
19 décembre 2011 à 13 h 26 min
Firy ny olona maty noho ilay domelina ??
Mba liana be izahay, fa mba lazao ny tena marina !! Ary rehefa eo ihany, inona marina hono ity nahazo an-dRamena ? Tena nanahirana an’i Nirana mafy angaha ?
19 décembre 2011 à 15 h 14 min
Ireny no hataon’ ny vahoaka ry Fanalita rehefa poretina sy monopolisena ara-toekarena sy ara-tsaina. Naka ny anjarany kely izy tam fanangonan-karena tafahoatra nataon’i Dadanareo.tsy mbola nisy dikany ireny raha mihoatra am ny nangalariny nentiny nitsoaka, anontanio rabe fa izy mahalala tsara ny somme.
fa ny famonoan’olona tsy mitam-basy sans sommation kosa, sans regret fa vao mainka latsa no nahazo ny fianakaviana. Tsy ho eken’ny Malagasy izany ry Fanalita a.
19 décembre 2011 à 16 h 41 min
Aza mandany andro an’izay milaza azy ho Tanora ianao ry i Fanalita fa tanoran’ny foza io a! Asain’ny tompony mivòvò ohatrin’ny al…ka isan’andro eto!!
Izay manko no andraiky!!!! hi!hi!hi!!!
19 décembre 2011 à 18 h 38 min
Izao no atao hoe : Trop de democratie, tue la democratie !!!
Manjary « sans qualité » koa, na ny forum aza, fa feno Mpangery an-joro mandoto tanàna !!!
19 décembre 2011 à 19 h 04 min
Ny tena mampihomehy dia: ahoana no ahafahany milatsaka aloha raha tsy tonga izy????
Ka tsy tokony ho fiadiana @ fahatongavany ve aloha no alohan’ilay hoe :tokony ……io dia
efa fomba firesak’i foza io » TOKONY » TTOKONY lava io fa tsy misy tanteraka fa mifanohitra aza no zava-mitranga.
Amiko dia FIANTSARAMBELATSIA ny an-dranamana eto ary asa na teren’ny inona marina lery?????may volotratra
angamba ka na ny zavatra lazainy aza tsy misy mandeha @’ izay izy akory ,teren-javatra marina i Lery angamba????
Fetsy izy manao an’io an!!atedoha be io!!!Mitady hanao fitaovana an’i dada indray lery hazahoana olona?teo aza izy mba
miandry ihany aho @ fampodiana an’i dada fa tsy misy resaka mba mipitika mihintsy mivoaka ny vavany.
« Atratra tsy manitra koa lasa vao MAMEROVERO ».
20 décembre 2011 à 13 h 15 min
Neninoro, Azo lazaina ho tanoran’ny Foza aho raha izany no fomba hilazanao ny vahoaka Malagasy,izay te hanova ireo mpanao Politika Antitra be, arovanareo Fatratra na dia Nangalatra sy mioson-ndra aza, Dia tsy maintsy loloavina antampin’ny loha sy hasohasoina foana.
Efa nahazo taona ianareo ary Hajaina, fa kosa, Avelao mba hisongadina ny Tanora. Fa aza dia sakanana amin’ny fomba reetra.
Fitiavan-tena izany ary tsy misy fitiava-tanindrazana na dia kely aza. Izahay rahateo tsy hanaiky izany intsony.
20 décembre 2011 à 17 h 31 min
Dia mirediredy lava ity le Valo ity lehiretsy marina. Efa im-pury tokoa moa i leiry no nirediredy hoe « ho avy aho », kanefa tsy sahy akory. Izany tokoa ilay hoe « vovon’amboa, tsy hery fa tahotra ». Ny marina manko dia efa naloan’ny malagasy tanteraka i leiry, ka raha mitetateta miverina eo dia TSIAFAHY no miandry azy, ary efa voahomana ny toerana asiana azy eny! Hibaby ny ratsy vitany amin’izay i leiry! Ny atahorako fotsiny dia ny hoe sanatria matin’ny olona izy vao mivoaka ny fiara-manidina, satria tena halan’ny malagasy i le Valo. Loza loatra manko ny nafitsony fony izy nitondra. Halatra be vava no nataony hampandrosoany ny orinasany TIKO, nalainy ankeriny ny tanin’olona tetsy sy teroa, raha tsy hilaza afa-tsy ny tany Antsirabe sy Alaotra ny tenako. Ny vono olona nataony tamin’ny 09 fevrier 2009 moa dia tsy lazaina intsony!
Précédent Article précédent : NOTAM sa TONDROZOTRA?
Suivant Article suivant : Magro milay 17 Desambra 2011